Maskaxdii ayaa Nalaga Qabsaday | allsanaag
Maskaxdii ayaa Nalaga Qabsaday
Mid ka mid ah gooni goosatada Hargeeysa ayaa sheegay in dhalinyaradoodii maskaxda laga qabsaday oo ay ka qabsadeen Soomaaliya. Waxaa dhab ah in dhalinyarada aysan waxba ku heeysan maamulka Hargeeysa, iyagoo lagu xannibey inta u dhaxeeysa Burco iyo Hargeeysa.
Siyaasiyiinta maamulka Hargeeysa waxa ay kalla dhamaan waayeen shacabka been ah in aqoonsigii uu soo dhawyahay, iyadoo caalamka oo dhan looga sheegay in aan aqoonsi jirin maadaama miiska aysan keenin wax lagu aqoonsado.
Waxa ay meel kasta la taagan yihiin in la dilay, waxaan loo sheegaa in Soomaali ay is wadda dishay oo aysan jirin cid dil ka fayoow. Hadaba marka dhalinyarada lagu yiraahdo ma gabyi kartin, ma heesi kartid, Burco iyo Hargeeysa xagga umma dhaafi kartid, maamulka inaad ammaantid ma’ahee waxba kama sheegi kartid iyo caburin kasta marka lagula kaco dhalinyarada waxaa dhab ah in ay qaxayaan. Hadaba siyaasiyiinta Hargeeysa goormeey riwaayadda, beenta iyo hagardaamada ay ka deeyn doonaan shacabka?
← Yaa u maqan reer Hirshabeele Khayraadka degmada Buraan ee gobolka Sanaag →